I-China Ifela Ukusinda I-copyright Nokutshalwa Kwezimali | Inhliziyo Galaxy
Isihloko: Amahlaya, Indaba
Usuku lokukhishwa: 2018-7-5
Impilo kaCheng Yong (Xu Zheng) ongumnikazi weShenoil, iphazanyiswa wukuhambela okungalindelekile. Usuka kumthengisi wemikhiqizo yokunakekelwa kwezempilo kwabesilisa ongakwazi ukukhokhela irenti ekubeni nguyena kuphela umuthi womuthi ojwayelekile obizwa ngokuthi "uLenin" eNdiya. Uthole inzuzo enkulu, ushintsho olukhulu empilweni yakhe, wabizwa ngokuthi " unkulunkulu wezokwelapha "isihloko seziguli. Kepha, ukudonsisana ngempi ngokuhlengwa nakho kwasabalala kancane kancane ekuqubukeni okumnyama kwamagagasi .....
UMuye Wen / Requiem (2014),Amadolobha Othandweni (2015), ibhokisi eliqongelelekayo lamabhokisi angu-6.32 billion.
UZheng Xu / Ulahlekile eThailand (2012),Ilahlekile eHong Kong (2015),ISiqhingi (2018), ibhokisi eliqongelelekayo lamabhokisi angu-2.54 billion
I-Zhuo Tan / Aibhokisi elihlanganisiwe eliphelele lebhokisi 6.81 billion.
Kunamafilimu ambalwa kakhulu akhuluma ngezinkinga zezikhungo nezingokoqobo, kanti amanye amahle kakhulu avinjelwe ngamazinga ahlukahlukene.Isikrini sivame ukugcwala ngazo zonke izinhlobo zamafilimu empi alwa namaJapane angenakho ukudla okunomsoco, amadrama akudala anenhliziyo yasesigodlweni amasu, nezindaba zothando lwegazi-lezinja zabaphathi abaphethe ngokweqile.Ukufa Ukuze Usinde kuzoba yibhayisikobho esika izinzwa zethu ezibucayi.
UXu Zheng othwebule indawo yasentwasahlobo ingulube ekhanyayo yeka ayisishiyagalombili, ngemuva kwalolu chungechunge lwe-TV, kuthiwa ungalokothi uthinte ekuqopheni umdlalo, ikakhulukazi ugxile emsebenzini wefilimu. Ungolunye ushintsho oluphumelele kakhulu kusuka kumlingisi kuya kumqondisi endaweni yamafilimu .Kukholakala ukuthi ukushona ukuze usinde kuzoba umsebenzi ophumelele kakhulu odutshulwe nguXu Zheng ngemuva kochungechunge lwe- "Lost" ,, Kumele kube okuthakazelisa kakhulu.
Le filimu isuselwa kubantu bangempela nasezintweni, kepha ilingiswa ngokuphelele, futhi umphumela osheshayo walokho kulingisa ukuthi izinhlamvu zomlingiswa oyinhloko: ama-arcs abalingiswa aqediwe futhi Akhanya ngesintu izinhloso zakhe zobugovu kulowo osiza abanye ngokunganaki izifiso zakhe futhi aqedele indlela yokuzihlenga. Konke ukungabaza, ukukhetha noshintsho alwenzayo kwifilimu kuyakholisa.
I- "Dying to Survive" iyifilimu enokubaluleka komphakathi, evumela izethameli ukuthi zibe nokuqonda okujulile kweziguli ze-leukemia kanye nesimo sokusinda komphakathi we-leukemia. Lapho umdlavuza ungathatha impilo futhi uqede umndeni, kunesisindo sokwenza ifilimu Mayelana nakho.
Isikhathi sokukhishwa: 2018-7-5
Izindleko zokukhiqiza ￥ 300,000,000.00
Dlulisa isilinganiso ￥ 300,000,000.00
Ihhovisi lamathikithi ￥ 3,100,000,000.00
Ukutshalwa kwezimali okuncane ￥ 500,000.00
Langaphambilini Ama-Avengers Endgame
Olandelayo: Abantu Bami, Izwe Lami